नेपाल भर्सेस ओमान : हेड टु हेडमा को बलियो ? यस्तो छ तथ्याङ्क स्वदेश नेपाल – Taja Khawar
नेपाल भर्सेस ओमान : हेड टु हेडमा को बलियो ? यस्तो छ तथ्याङ्क स्वदेश नेपाल
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन ०६, २०७८ समय: १७:५०:३०
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपालले ओमानसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न लागेको हो।
नेपाल र ओमानबीचको खेल सेप्टेम्बर २६ अर्थात असोज १० गते हुने एन्फाले जानकारी दिएको छ। खेल कतार युनिभर्सिटी फुटबल ग्राउण्डमा नेपाली समय अनुसार बेलुका ७ बजे शुरु हुनेछ। साफको तयारीका लागि नेपाली टोली हाल कतारमै बन्द प्रशिक्षणमा छ।
हालसम्म नेपाल र ओमानले १० खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। ती दश वटै खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। पछिल्लोपटक दुई टोलीको भेट फिफा विश्वकप छनोटमा सन् २००७ मा भएको थियो। सो खेलमा नेपाल २–० गोलले हारेको थियो।
यसअघि नेपालले घरेलु मैदानमा भारतसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। नेपाली टिम कतारबाटै साफका लागि माल्दिभ्स जाने छन्। माल्दिभ्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर १ देखि १६ (असोज १५ देखि ३०) गतेसम्म आयोजना हुनेछ।
नेपालले आयोजक माल्दिभ्ससँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र माल्दिभ्सबीचको खेल अक्टोबर १ (असोज १५) मा मालेस्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा हुनेछ।
नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलंकासँग अक्टोबर ४ (असोज १८) मा खेल्नेछ। नेपालले त ेस्रो खेलमा भारतसँग अक्टोबर १० (असोज २४) र लिग चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग अक्टोबर १३ (असोज २७) मा खेल्नेछ।
पाँच राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको लिग चरणको खेलपछि शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि अक्टोबर १६ (असोज ३०) मा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्।
एक व्यक्तिले बुहारीसँग ब’लपूर्व’क स’म्बन्ध कायम गरेर छोराको जीवन स’माप्त पारेका छन् । भारत, उत्तर प्रदेशको मुरादाबादको मझोला प्रहरी चौकी क्षेत्रमा सुरक्षा गार्डले आफ्नी बुहारीसँग त्यस्तो काम गरेका हुन् । दुई दिन पछि घर फर्केका छोराले विरोध गरेपछि उनले छोराको जीवन स’माप्त पारेका हुन् ।
उनीहरूले मेरो लोग्नेको जीवन स’माप्त पारे र मेरी सासूलाई पनि सि’ध्या’उन खोजे । मेरो कान्छो देवर पनि ससुरासँगै छन् ।’ पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनन्दले भने कि पीडितको तहरीरमा आरोपी सुरक्षा गार्ड र उनको छोराको बि’रूद्ध उजुरी दर्ता गरिएको छ । सुरक्षाकर्मी ससुरा देवरविरुद्ध ब’लपू’र्वक स’म्ब’न्ध राखेको र जीवन लिएको भन्दै उजुरी दर्ता गरिएको छ । तस्विर फाइल यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला
Last Updated on: September 22nd, 2021 at 5:50 pm